डा. मोहनमान सैंजू | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. मोहनमान सैंजू
डा. मोहनमान सैंजू
मोहनमान सैंजू १९९८ सालमा पाल्पास्थित तानसेनमा जन्मिएका हुन् । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरका साथै एलएलबी गरेका छन् । अमेरिकाबाट विकास र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका सैंजूसँग लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेको अनुभव छ । त्रिविको शिक्षाध्यक्ष, भूमिसुधार विभागको निर्देशक, योजना आयोगको उपाध्यक्षलगायतका जिम्मेवारी उनले सम्हालिसकेका छन् । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भएर कार्य गरेका सैंजूले गरीबी निवारणकोषको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । हाल उनी अध्ययन र अनुसन्धानात्मक कार्यमा व्यस्त छन् । अध्ययन-अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था आईआईडीएसको कार्यकारी अध्यक्ष भएर सैंजूले करीब ७ वर्षकाम गरिसकेका छन् ।
गरीबी निवारणको चुनौती
मुलुकले अङ्गीकार गरेको योजनाबद्ध विकास क्रममा गरीबी निवारण एउटा प्रमुख मुद्दाका रुपमा रहने गरेको छ । यसको निराकरणमा प्राप्त उपलब्धिबाट सन्तोष लिन सकिने ठाउँ भने कम नै छ । दशौं आवधिक योजनामा गरीबी निवारण रणनीतिपत्र (पोभर्टी रिरडक्शन स्ट्राटेजी पेपर) लाई योजनाको मूल आधार बनाइएको थियो । अहिले मुलुकमा बाह्रौं आवधिक योजनाको अवधिमा पुग्दासम्म पनि यसतर्फो उपलब्धि अपर्याप्त ठहरिन गएको स्पष्ट छ ।
यसको अर्थ गरीबी निवारणतर्फ प्रयासै नभएको भन्नेचाहिँ हुँदै होइन । विश्व बैङ्कको सहयोग तथा प्राविधिक निगरानीमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रियस्तरको जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षण (नेशनल लिभिङ स्ट्याण्डर्ड सर्वे) ले मुलुकमा गरीबीको रेखामुनि रहन बाध्य जनसङ्ख्या ४२ बाट ३१ मा झरेको देखाएबाट वैज्ञानिक आधारमा गरिएको सर्वेक्षण नजितालाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्ने देखिएको थियो । द्वन्द्वकालमा गरिएको सर्वेक्षण कति हदसम्म यथार्थपरक थियो भन्ने वादविवाद र मतान्तर रहेको भए पनि सर्वेक्षणको आधार वैज्ञानिक रहेबाट नतिजालाई सजिलै नकार्न सकिने ठाउँ भने थिएन ।
गरीबी निवारणका समस्या विश्लेषण गर्ने क्रममा यसको आधार केलाई मान्ने भन्ने कुरामा विभिन्न मत थिए र छन् पनि । राष्ट्रिय योजना आयोगले सर्वप्रथम निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत आँकलन गरी जीवन धान्न चाहिने खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यकताको कुरालाई आधार बनाई दैनिक २२ सय क्यालोरीलाई मुख्य आधार बनाएको थियो । पछि आएर विश्व बैङ्कको सहभागितामा सम्पन्न राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा पनि यसैलाई मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरीबी निवारणलाई पनि एउटा प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य आँकलन गर्दा दिनको न्यूनतम १ अमेरिकी डलरलाई आधार मानिएको थियो ।
राष्ट्रियस्तरमा गरिएको जीवनस्तरसम्बन्धी सर्वेक्षणमा गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिको आम्दानीका साथै उनीहरुको शैक्षिकस्तर, आवासस्थिति (स्कूल र स्वास्थ्य केन्द्रको दूरी, यातायात चल्ने बाटोमा पहुँच, विद्युत् सेवाको पहुँच) जस्ता पक्षलाई पनि विश्लेषणको अङ्ग बनाइएको थियो । हालसालै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका विशेषज्ञहरुले गरेको अध्ययनमा पनि गरीबीलाई व्यापक परिवेशमा हेरिएका कारण गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अंश बढी देखिएको छ । यस अध्ययनको आधारमा नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो निश्चित हो कि, गरीब भन्नाले आर्थिक अवस्थालाई मात्र हेर्ने प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा फरक दृष्टि र सोचको खाँचो छ । किनभने गरीबको आर्थिक अवस्थाका साथै उसको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा पहुँच, सामाजिकस्तर र स्थिति तथा सांस्कृतिक पहिचानमा समावेशिताजस्ता कुरा पनि महङ्खवपूर्ण पक्ष हुन् । त्यसैले गरीबीको यो एकीकृत अवस्थालाई हेरिनु जरुरी पनि छ । यसप्रति नेपाल सुसूचित रहेको छ र जनआन्दोलन-२ ले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरुमा विभेद र समावेशीकरणका कुरालाई अग्रपन्थमा ल्याएको स्पष्ट छ ।
गरीबी निवारणको चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक लिई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि ल्याउन नसक्दासम्म गरीबी निवारणको प्रयास सफल हुन सक्दैन । यसका लागि गरीबको सम्पत्तिमा पँहुच र गैरकृषि क्षेत्रको आयस्रोतमा पनि थप प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको शेयर प्रवाहमा गरीबलाई पनि समावेश गराउने प्रयासलाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी सहकारीको माध्यमबाट भारतको सहकारी संस्थामा जस्तै कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायमा गरीबको पँहुच बढाउने प्रयास पनि हुनसक्छ । जग्गामा आश्रति गराउन गरीब र भूमिहीन कृषकलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा व्यवहारमा अत्यन्त कठिन हुँदै गएको तथ्य प्रस्ट छ । किनभने खेतीयोग्य जग्गा सीमित हुन्छ । जब कि गरीब र भूमिहीन कृषकको सङ्ख्या वर्षकोनि वृद्धि भइरहेको छ । तथापि मोहियानीसम्बन्धी कनूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्याउन सके अझै पनि हजारौं मोहियानी कृषकलाई जग्गाको मालिक बनाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालको सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा सञ्चालित गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको समीक्षात्मक रुपमा विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । एकातिर लघु-वित्तको माध्यमद्वारा गरीबी निवारणतर्फ प्रयासरत संस्था, बैङ्क तथा कार्यक्रमहरु घनीभूत रुपमा क्रमश: बढेर गएको पाइएको छ । अर्कोतर्फ सरकारीस्तरबाटै पनि विश्व बैङ्कको सहयोगमा सञ्चालित गरीबी निवारण कोषको कार्यक्रम महत्वपूर्ण देखिन्छ । समाजमा तिरस्कृत हुन बाध्य दलित, जनजाति तथा महिलालाई सही पहिचान तथा सामाजिक परिचालन (सोसियल मोबिलाइजेशन) को माध्यमबाट सङ्गठित गरिनुपर्छ । उनीहरुकै सक्रियतामा गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच र तदनुरुपको कार्यक्रमले गरीबी निवारणतफर्महङ्खवपूर्ण योगदान गर्ने स्थिति देखा परिरहेको छ । यी र यस्तै ‘सभ्य’ कार्यक्रमलाई तथ्यगत आधारमा विश्लेषण गरी सफलता प्राप्त गर्न सकिएको मोडललाई आधार बनाई सकेसम्म चाँडो देशभित्र विस्तार गरेर लैजानुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रुपमा सीमान्तकृत गरीब जनता गरीबीको रेखामुनि रहनुपर्ने बाध्यताबाट माथि उकास्न ठोस परिवर्तन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ । यो लोकतान्त्रिक नेपालअघिको एउटा चुनौती र अवसरका रुपमा रहेको छ । यस दिशामा देशभित्रकै अनुभवलाई समीक्षा एवम् मूल्याङ्कन गरी गरीबी निवारणतर्फ राज्यले ठोस ‘इच्छा शक्ति’ को प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनसमेत मद्दत गर्ने स्पष्ट छ ।